Iwo mashanu emazinga evashandisi veLinux | Kubva kuLinux
Iwo mashanu emazinga evashandisi veLinux
Shamwari dzeLinuxadictos dzakamisa mashanu mazinga evashandisi veLinux, zvinoenderana neruzivo rwavo uye kuzvipira kune iyo penguin system. =)
Tsvaga kuti uri ani ...
Nhanho 5: mushandisi anoshandisa Linux neWindows mukuchinjana kuitira nyore, nekuti ivo vanobvuma kuti hapana kana maOS maviri pachawo anosangana nezvose zvavanotarisira, saka rakakamurwa pakati pezviviri zvinoenderana
izvo zvaunoda. Haatore divi reimwe kana iyo imwe, iye anoziva kuti vese vane zvayakanakira nezvayakaipira, saka anovagashira sezvavari.
Nhanho yechina: mushandisi anoshandisa Linux nekuti zvinoratidzika kwaari kuti zvinozadzisa zvese zvinodiwa, uye zvinosangana nezvaanotarisira zuva nezuva, haadi Windows nekuti zvese zvaangaite nezvazvo, iye
inogona kuita paLinux pasina chipingaidzo. Kana uchikurudzira OS kune wechitatu bato, usati wasarudza Linux, ongorora mamiriro acho uye wozopedzisira wakurudzira OS iyo inokodzera mushandisi.
Nhanho 3: mushandisi anoshandisa Linux pachena, zvisinei pachivande anoshandisa Windows uye anoiviga, sekunge chiri chitadzo chikuru, kana dai yaive cocaine kana mapikicha ekuona zvinonyadzisira amai vake vari musvo.
Iye achadzivirira Linux kusvika kurufu, asi achavanza mafaro ake ane mhosva kubva kune vamwe nekutya kurega kuva chikamu cheiyo nharaunda iyo kwaari ndeye akakwirira.
Nhanho 2: mushandisi anoshandisa Linux, anongoshandisa yekuraira mitsara uye haana kumbobaya-baya icon kwemakore. Izvo hazvishandise MSN kana GTalk, chete MIRC. Anopedza zuva achidzungaira kumaforamu uye mablog
kutuka wese asingafunge saiye. Akabaya webhusaiti yeMicrosoft, injini yekutsvaga yeGoogle, uye Yahoo achishandisa kabhuku chete, akazviita nekuti aigona kuzviita uye kuratidza nyika kuti aive
akanakisa nakare kose. Kune uyu mushandisi, kana ari paInternet, saka ndezvemahara, anotora nhepfenyuro dzeTV, mimhanzi, mafirimu, uye obva azvirumbidza pachena kuva navo pamberi pevamwe vese.
Chikamu 1: shandisa Linux. Iye anonwa chete mvura, nekuti kwaari, kusaziva chirevo cheCoca Cola kwakafanana nekusaziva kodhi yekodhi yeOS. Paaive achiri mudiki vakarega kumupa matoyi kubvira zvavaigara
akabvisa zvombo, akaramba kutamba nechimwe chinhu chine mashandiro aive asinganzwisisike. Kana iye haashandise chero chinhu chiri chikamu chechero monopoly, akagadzira yake pc pazera regumi nezvikamu zvakagadzirwa naiye
Kunyangwe yekupokana nekupa mari mukutsinhana nezve Hardware, kwaari, Hardware inofanirwa kuve yemahara. Haapemberere Kisimusi nekuti kwaari, rinongova zuva iro kutengeserana kwemahara kwakavakirwa kurarama muzhizha rose. Iye haatendiwo kuna Santa Claus, nekuti akaona kuti chaive chigadzirwa chebhizimusi chakagadzirwa naCoca Cola, kambani imwechete ine fomura yeimba. Iye anovenga mbuya vake, sezvo ivo vachibika zvimwe zvinoshamisa maoodles ane tuco, nekuda kwechiuru chemakore-chiuru chakavanzika chemhuri mabikirwo, ayo, ari kuvanzika, ari ega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iwo mashanu emazinga evashandisi veLinux
nhanho 6, ini ndaishandisa linux ndikadzokera kumahwindo pasina chero fanaticism kune iyo OS
hahahaha, chikamu 4.5
hahaha zvakanyanyisa kunaka, ndinozvitora sendiri 4
Pindura kune fuzzynoise
micky miseck akadaro
hahahaha nhanho 7 inoshandisa MacOX nekuti iyo keyboard inopenya nekuti iri aluminium uye mazai madiki akadaro uye inozvikudza pachayo nekushandisa FLOSS neSoft. Vhura Sosi pane yako MacOx uye shandisa Linux chete pane maseva
Pindura kuna micky miseck
Chinja ma AMR mafaera eMP3, OGG, nezvimwe.
Iwo manomwe akanakisa ekuparadzira GNU / Linux